Mogadishu Journal » Alexis Sanchez oo January ka dhaqaaqaya Manchester United
Naadiga Manchester United ayaa diyaar u ah inay iska iibiso weeraryahankeeda Alexis Sanchez marka suuqa kala iibsiga bisha Janaury uu dib u furmo.
Xiddiggan oo suuqii bishii January ee sanadkan kaga yimid Arsenal heshiis la is dhaafsaday isaga iyo Henrik Mkhitaryan ayaa doonaya ku biiritaanka kooxda Paris Saint-Germain.
Laacibka reer Chile ayaa ka mid noqday xiddigaha uusan xiiseyn Jose Mourinho, ka dib bandhig hooseeyaa oo uu sameeyay, waxaana tan iyo markii uu xirtay maaliyadda cassaanka ah uu dhaliyay keliya Afar gool.
Sanchez ayaa doonaya ku biiritaanka PSG, hase haatee, kooxda ka ciyaarta Ligue 1 ayaanan diyaar u ahayn inay bixiso mushaaraadka uu filanayo xiddiggan, waxaana ay la tacaaleysaa mushaaraadka Neymar Jr iyo Kylian Mbappe.
29-jirkan ayaa Old Trafford ka qaata mushaar dhan £400,000 toddobaadkii, waana mushaar aad u fara badan, iyadoo ay jirto inuusan sameynin mushaarka uu qaato bandhig u qalma.
Wakiillada weeraryahankii hore ee Barcelona ayaa ka shaqeynaya inuu laacibkan ka dhaqaaqo Red Devils, iyadoo kooxda United ay albaabada u furtay inay iska iibiso suuqa jiilaalka, sida ay Mirror sheegeyso.